Aqal Soomaaliga Iyo Qalabka Lagu Dhiso - Diblomaasi
Dhaqan, Af, iyo Taariikhda
Soomaalidu waxay gacantooda ku samaysan jireen guryaha ay ku noolyihiin kuwaas oo u kala bixi jiray seddex (3) guri oo kale ah.
1. Laba daryaale “Aqalka arooska”
2. Guri xaas “Aqalka shan iyo wixii ka badan ay ku noolyihiin”
3. Ganbis “ Aqal soomali u samaysan qaabka Mutulaha”
Sida caadiga ah dhalinyarada iyo Raga xooga ahiba waxa ay seexan jireen ama ku cawayn jireen Ardaaga halkaasoo ay kagana warhayn jireen Reerka iyo Xoolahaba.
Qalabka dhismaha aqal Soomaaliga
Qalabka dhismaha ee Aqal Soomaaligu wuxuu ahaa mid ay dhamaantii farsameeyeen dadka Soomaalida ahi, iyaga oo aan waxba la soo daggin soona amaanaysan waxaanay adeegsan jirreen waxyaabaha dabiiciga ah ee laga helo Deeggaaanka bal hadaba si aynu wax yar uga ogaano Ilbaxnimadaa iyo Farsamada cajiibka ah waxaynu soo qaadan doonaa Qalabka iyo Qaybaha guri Soomaaliga.
1. Sahan = indha indhayn (observation) iyo baaraan dag ka dib halka guriga laga dhiso.
2. Sees/Qodid = waa meesha laga unko shayga ugu horeeya marka la abyamayo aqalka kaas oo loo adeegsado Sabarad
3. Dhig sineedyo = labada dhigood ee loogu hortaago
4. Dhig geeseedyo = waa dhigo dhinaca loo saaro dhig sineedyada.
5. Dhig afeedyo = waxay ka soo horjeedaan dhigsineedyada waxaay isugu yimaadaan Udubka loo yaqaan Udub Afaaf.
6. Udub geeseedyo = 12 udub oo kala raaca labada dhig geesood.
7. Udub afaafyo = udbo ka kooban lix oo inta badan Afaafka lagu dhiso.
8. Dhig soosaareedyo = 10-12 dhigood oo lagu dhiso aqalka, 4 ka mid ah waxa la yidhaa Dhigo Dhexoosyin waana kuwa ugu sareeya, 4 Dhiggo Baaleedyo waxaanay ka maraan baalaha.
9. Xakab = waxa la dhaafiyaa dhigaha si is waydaar ah.
Inataa ka dib waxa loo galaa heeryada oo ka kooban.
I. Weedhaadhka gaaggaaban = oo laba dhig geesood ah.
II. Saamaha = oo ka kooban laba sooraac dhig sineed.
III. Aloolka daahada ah.
IV. Alool doceed
V. Cawsaska kala duwan sida.
B) Caws xariir ah oo isku joog Todobaale ah oo gala dahada.
t) Daroof oo gasha fooda guriga.
j) Sino saar = wuxuu isku hayaa saanta iyo dhig soo saareedyada xaga danbe.
x) Todobaale = caws lagu sameeyo docda.
Intaa ka dib waxa bilaabma cawsaska loo yaqaan foodsaaryada aqalka, waanna la xeeraa. Ugu danbayna waxa loo galaa gogosha oo ka kooban saan laga saraysiiyo saliyo.
Tixraacyo: Abwaan cabdirisaaq (oday, Buugga afraad iyo saddexaad dugsiga sarre, Culuumta maansada (saciid hargysaawi)
Related Topics:Aqal Soomaaliga Iyo Qalabka Lagu Dhiso |Tukesomalism.com
Agabyada Laga Helo Guri Soomaaliga |Tukesomalism.com
Waa qoraa ka tirsan Diblomaasi. Qoraaga wuxuu wax ka qoraa aafooyinka haysta bulshada Soomaaliyeed sidda dhibaatooyinka qaadka, sigaarka iyo qabyaaladda. Wuxuu kalloo wax ka qoraa suugaanta, taariikhda Soomaalida, dhiirogelinta, caafimaadka, sheekooyinka madadaaladda iyo amuuraha ganacsiga.
Xiddiga fanka fanaaniinta Soomaaliyeed ee Aar Maanta wuxuu ka caawiya carruurta Soomaaliyeed ee deggan degmo ka tirsan magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka oo loo yaqaan “Muqdisho yar oo ku taal Mississippi” si ay u bartaan luuqadda iyo dhaqanka dalkooda hooyo.
Aar Maanta, oo caadiyan fadhigiisu yahay magaaladda London, wuxuu arkay baahi degdeg ah oo loo qabo in afka Soomaaliga la geliyo nolosha carruurta, oo qaarkood ay ku dhasheen Mareykanka oo aysan ku hadli karin afkooda hooyo.
“Markii uu wiilkaygu dhashay waxaan raadineynay luuqada Soomaaliga waxaana ogaanay inay tahay wax aan la heli karin. Waxa kaliya ee aan haystay waxay ahaayeen xusuusteyda,” ayuu yiri. “Taasi waxay ahayd dhimbiilkii mashruucan.”
Erayada qaarkood waxaa qorey carruurta Soomaaliyeed oo qaarkood ay da’doodu tahay siddeed jir. – Carruurtan ayaa ku nool xaafadda Cedar -Riverside ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka – oo ah deegaan ay ku nool yihiin Soomaali aad u badan.
Heesahooda ayaa la sii daayay bishan waxa lagu tilmaamay “albumkii carruurta iyo af Soomaaliga ee ugu horreeyey ee ku baxa muusigga adduunka”.
Fanaanka Xasan Nuur oo loo yaqaano “Aar Maanta” oo horkacayay caruurtii Bandhigfaneedka la la wadday, ayaa VOA u sheegay in ujeedada soo badhigista albumkan ay ugu wayntahay in caruurta la dhiirigaliyo, afkooda iyo dhaqankooda la jecleysiiyo.
Xarutna Cedar Cultural inkasta oo ay ku caanbaxday soo bandhigista bandhigfaneedyo ay fanaaniin Soomaaliyeed garwadeeno ka yihiin, hadana waa markii ugu horeysay ee ay Soo bandhigaan heeso iyo suugaan u gooni ah ubadka Soomaaliyeed. Soomaalida suugaan ku noosha ah ee aan ka baaqan badhigfaneedyadooda waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Mukhtaar oo arrimaha dhalinyarada ka shaqeeya, xalayna ay uga duwanayd habeennadii kale ee uu goobtan imaan jiray.
Albumkaan ‘ubadkaa mudnaan leh’ ayaa noqonayaa Albumkii ugu horeeyay ee nuuciisa ah ee caruurta loo sameeyo, laftooduna ay ka qeybqaadanayaan. Heesta halkudhigga u ah albumka iyo dhowr kaleba, waxaa hal abuuray Pro. Siciid Saalax Axmed oo wax ka dhiga Jaamacadda Minnesota. Waxa uuna ii sheegay in isaga iyo fanaanka Aar Maanta ay sii wadi doonaan barnaamijyada sare loogu qaadayo fahamka caruurta ee afkooda iyo cidda ay yihiin.
Waa Caruur Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Minneapolis oo ah halka ay deggan yihiin Soomaalida ugu badan ee gobalka Minnesota. Waxa ay la heesayaan fanaanka Xasan Nuur “Aar maanta” oo habeenkii xalay ahaa Xarunta Cedar Caltural ku daah furay albam cusub oo magaciisu yahay Ubadkaa mudnaanta leh.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ayaa ku tilmaamay bandhigfaneedkaan mid waaliddiinta u furaya wadadii ubadkood ku hagi lahayd barashada afkooda, oo caruurta qurbaha ku koreysa uu dhib badanka heysto. Xalwo xuseen waa habeenkii ugu horeeyay ee ay xarunta Cedar Caltural Centar u timaaddo bandhigfaneed. – Xalwo Xuseen
Kala soocidda jiilka Soomaaliyeed
Mid ka mid ah arrimaha muhiimka ah ee uu Aar Maanta doonayay inuu wax ka qabto ayaa ah “kala goynta jiilasha – waalidiinta ku dhashay Soomaaliya iyo carruurtooda ku nool Mareykanka, halkaas oo aysan ahayn cimilada oo kaliya qabow, laakiin sidoo kale dabeecadaha ku wajahan bulshada Soomaaliyeed”.
Heesahu waxay aad ugu ku saabsan yihiin waalidiinta, gaar ahaan hooyooyinka, qaarkood oo nimankoodu muddo dheer ka tageen.
Waxay ku saabsan yihiin safarro “Laga soo bilaabo Geeska [Afrika] ilaa Cedar”, waxay tilmaamayaan sida, Soomaaliya, “gacan ku dhiiglayaashu ugu dabaalanayaan barkadaha gumaadka”, waxayna si kalgacal leh uga hadlaan dhismayaasha dhaadheer ee Cedar Riverside, “. – Faadumo Jamiila Biixi
Marwo Biixi ayaa sheegtay in hannaanka samaynta albumku uu gacan ka geystay isku xidhnaanta jiilalkii kala duwanaa iyadoo fursad loo siinayo dhallinyarada inay shabaddooda ku dhejiyaan Soomaalinimadooda.
“Odayaashu waxay rumeysan yihiin inaan ilownay afkeenna, dhaqankeenna iyo taariikhdeenna.”
“Abuuritaanka heesahan waxay naga caawisay inaan la xiriirno dhaxalkayaga iyo awoowayaasheen, iyadoo noo oggolaaneysa inaan sameyno wax u gaar ah oo cusub, si aan u sameyno nooca aan u leenahay waxa ay tahay Soomaalinimada.” – Faadumo Jamiila Biixi, Mid kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku nool Minneapolis
Madaxweynihii hore ee Zaambiya ahna hogaamiyihii xorriyadda Kenneth Kaunda ayaa ku dhintay da’da 97.
Geeridiisa waxaa xaqiijiyay madaxweynaha haatan ee Zaambiya Edgar Chagwa Lungu, oo ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook khamiistii: “Waxaan ku ogaaday geeridaada galabnimo murugo weyn”
“Aniga oo ku hadlaya magaca qaranka oo dhan iyo magacayga waxaan ka baryayaa in dhamaan qoyska Kaunda la qalbi qaboojiyo iyada oo loo baroor diiqayo Madaxweynaheena Koowaad iyo halyeeyga runta ah ee Afrika,” Madaxweynaha ayaa intaas ku daray.
Kaunda waxaa looga daweynayay xanuun aan la shaacin ee isbitaalka militariga oo ku yaala caasimada Lusaka, xafiiska Lungu ayaa ku sheegay war saxaafadeed Isniintii. Xafiiskiisa ayaa u sheegay Reuters maalintii Talaadada in laga daweynayo oof wareen.
Kaunda wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee Zaambiyya ka dib markii waddanka koonfurta Afrika uu xorriyadda ka qaatay Ingiriiska. Wuxuu xukunka hayey intii u dhaxeysay 1964 ilaa 1991 waxaana lagu yaqaanaa inuu ka mid yahay kooxaha waa weyn ee dagaalka kula jira qaarada.
Kaneth Kuanda ayaa la sheegaa inuu xirriir aad u wanaagsan la lahaa Soomaaliya, isla markaana uu booqday. Kaunda waxaa lagu xurmeeyaa halgankiisii xorriyadda Zaambiya, oo xorriyadda ka raadisay xukunkii caddaanka laga tirada badan yahay ee 1950-meeyadii.
Horraantii 1960-meeyadii, Kaunda wuxuu ku biiray siyaasad firfircoon waxyar kadib markii xabsiga laga sii daayay, isagoo noqday hoggaamiyaha xisbiga cusub ee xorriyadda qaran ee midoobay (UNIP). Kaneth Kuanda ayaa kaalin muhiim ah ka qaatay diblomaasiyada Gobolka, oo si dhow ula shaqeyneysa Mareykanka si loo helo xalka dhibaatooyinka isku dhacyada ee Rhodesia, Angola iyo Namiibiya. laga soo bilaabo 1972-kii ilaa 1991kii Zaambiya waxay aheyd hal wadan oo qeyb Ka ah UNIP ayadoo xisbiyada kale ay hoos u dhigeen “One Zaambiya, One nation.” Kaneth Kuanda wuxuu ku guuleystay Fredrick Chiluba oo ka tirsan dhaqdhaqaaaqa dimuqraadiyada ee dhinacyada kala duwan ee dimuqraadiiga ah.
Sanadka markuu ahaa 1991-kii, wuxuu bilaabay kobcinta bulsho-dhaqqale iyo baahinta xukunka dowlada.
Kaunda aabihiis, oo ka soo jeeda Nyasaland (hadda Malawi), wuxuu ahaa macallin iskuul; hooyadiis, oo waliba macallin ahayd, waxay ahayd haweeneydii ugu horreysay ee Afrikaan ah ee wax ka dhigta gumeysigii Zaambiya. Labaduba waxay wax ku barteen qowmiyada Bemba ee waqooyiga Zaambiya, halkaas Kaunda oo yar uu ku helay waxbarashadiisii hore, isagoo dhameeyay dugsiga sare horaantii 1940s. Sida dadka Afrikaanka ah ee intooda badan gumaystaha Zaambiya ee gaadhay heer dabaqad dhexe ah, wuxuu sidoo kale bilaabay inuu dad wax baro, marka hore gumaysigii Zaambiya iyo badhtamihii 1940-yadii Tanganyika (hadda Tansaaniya).
Lusaka waa caasimada iyo magaalada ugu weyn ee Zaambiya. Waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu dhaqsiyaha badan ee soo koraya koonfurta Afrika. Lusaka waxay ku taal qaybta koonfureed ee plateau-dhexe meel sare oo qiyaastii ah 1,279 mitir. Laga soo bilaabo 2019, dadka ku nool magaalada waxay ahaayeen qiyaastii 3.3 milyan, halka dadka ku dhaqan magaalooyinka lagu qiyaaso 2.5 milyan sanadka 2018.
Lusaka waa xarunta ganacsiga iyo dowladda labadaba ee Zaambiya waxayna isku xirtaa afarta jid ee waaweyn ee dalka ee aada waqooyiga, koonfurta, bariga iyo galbeed. Ingiriisigu waa luuqadda rasmiga ah ee maamulka magaalada, halka Nyanja iyo Bemba ay yihiin luuqadaha waddooyinka inta badan looga hadlo.
Kaunda – oo caan ku ah magaca KK – wuxuu si weyn u taageeray dadaalada lagu joojinayo midab kala sooca Koonfur Afrika. Wuxuu sidoo kale ahaa hogaamiye taageersan dhaqdhaqaaqyadii xoreynta ee Mozambique iyo kan hada loo yaqaan Zimbabwe.
Noloshii dambe Kaunda wuxuu u weecday la dagaalanka HIV ka dib markii mid ka mid ah wiilashiisa, Masuzyo, uu u dhintay cudur la xiriira Aids-ka. “Waxaan la dagaalanay gumaysiga. Waa inaan hada u isticmaalnaa xamaasad la mid ah la dagaalanka Aids, oo ku hanjabay inuu ka tirtirayo Afrika,” ayuu u sheegay Reuters 2002.
Kenneth Kaunda, Siyaasadiisa dhaxal galka leh
Siyaasadda arrimaha dibedda, Kenneth Kaunda wuxuu caawimaad xagga saadka ah siisay dhaqdhaqaaqyada kale ee xoraynta Afrika, oo ay ku jiraan Zimbabwe African People’s Union (ZAPU) iyo jabkii kala baxay Midowga Afrika ee Zimbabwe African National (ZANU) ee Koonfurta Rhodesia iyo African National Congress (ANC) ee Koonfur Afrika. ANC Radio Freedom ayaa loo ogolaaday inay ka tabiyaan Lusaka waxayna ku hoos jirtay ilaalinta Kaunda in ANC ay sameysay halgan hubaysan, ka dibna mid diblomaasiyadeed oo ka dhan ah midab kala sooca. Zaambiya waxay sidoo kale ka caawisay Zimbabwe inay xornimadeeda ka qaadato xukunkii cadaanka tirada yar ee 1980.
Laakiin intii uu xukunka hayay, Zqambiya waxay noqotay dowlad hal xisbi ka kooban – taasoo si hufan u siisay isaga xukun buuxa. Kaunda wuxuu mamnuucay mucaaradka siyaasadeed 1973. Waxaa lagu qasbay inuu ka laabto go’aankan 1991 sababo la xiriira cadaadis caan ah oo ay kicisay cunno yarida aasaasiga ah iyo sidoo kale cadaadiska caalamiga ah ee sii kordhaya ee dimuqraadiyada weyn ee Afrika.
Wuxuu ka dhacay xukunka markii ay soo ifbaxday dimuqraadiyadda xisbiyada badan. Sanadkii 1991, waxaa looga adkaaday doorashadii madaxtinimada Fredrick Chiluba oo ka socday xisbiga Movement for Multiparty Democracy (MMD) ka dib olole adag oo uu ku tartamay. Kaunda wuxuu aqbalay guuldaradii isagoo ruxaya astaantiisa astaan gacmeedka cad.
Kaunda ayaa sii waday ku lug lahaanshiyaha siyaasada qaranka sanadkii 1996-dii wuxuu isku dayay inuu u tartamo madaxtinimada. Sikastaba, dowlada Chiluba ayaa bedeshay dastuurka si qofkasta oo waalidkiis ay ka yimaadaan dibada wadanka loo arko ajnabi sidaa darteedna uusan u tartami karin xafiiska.
Chiluba ayaa markii dambe isku dayay inuu masaafuriyo Kaunda isagoo ku eedeeyay inuu yahay Malawi. Sannadkii 1997, Chiluba ayaa Kaunda ku tuuray jeel maalinta Kirismaska iyadoo lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa isku day afgembi ee dhicisoobay.
Sannadkii 1999-kii, xilligii uu xukumayay Chiluba, wuxuu ku dhawaaqay dal-la’aan Maxkamad Sare ee Zaambiya, laakiin wuxuu ka horyimid go’aankan Maxkamadda Sare ee Zaambiya, oo ku caddeysay inuu yahay muwaadin Zaambiya ah sannadka soo socda.
Guud ahaan qaaradda Afrika, waddooyin badan, dhismayaal iyo garoomo diyaaradeed ayaa loogu magac daray isaga. Xitaa markii uu duqoobay, wuxuu si isdaba joog ah codkiisa ugaga hadlay fagaarayaasha isaga oo ka soo horjeeda cadaalad darrada la aaminsan yahay iyo sidoo kale cadaadiska dadka laga tirada badan yahay.
Taariikhyahaanno reer Al-Jeeriya ah oo u kacay sidii loo sii celin lahaa keydkii gumeysigii Faransiiska – Warbixin
Taariikhyahan Sophie wuxuu leeyahay xirida marinka keydka arrimahan looma jeedin “in la qariyo xaqiiqooyin aan la sheegi karin, laakiin waa in la qariyo karti darada madaxdii kaydka Aljeria.”
Sagaal taariikhyahanno reer Al-Jeeriya ah ayaa ugu yeeray Madaxweyne Cabdul Majiid Tebboune inuu joojiyo “caqabadaha xafiisyada” ee keydka qaranka. 25-kii Maarso, taariikhyahanno ay madax u yihiin Maxamed Ould Si Al-Qarsou, Daho Gerbal iyo Ammar Muxannad ayaa warqad furan u qoray Tebboune, iyagoo ka dalbanaya inuu joojiyo caqabadaha xaddidaya gelitaanka kaydka.
Hindisahan wadajirka ah waa mid aan horay loo arag waana saameyn ka dhalatay daabacaadda warbixintii Benjamin Stora ee bishii Janaayo 2021 ee magaalada Paris ee ku saabsan dib-u-heshiisiinta dhaxalka xusuusta ee Faransiiska iyo Aljeeriya.
Saraakiisha Faransiiska ayaa dhowr jeer ku celceliyay sida ay lagama maarmaanka u tahay in Aljeeriya laga rogo boggii hore ee gumeystaha lana furo bog cusub.
Warbixinta waxaa ku jiray soo jeedinno ah in xiriirka labada dal laga siibo xaaladda curyaannimada ee ay keeneen arrimaha xusuusta gumeystaha ee dhex taal. Aljeeriya waxay dalbaneysaa in dib loo soo celiyo dhammaan keydkii gumeysigii Faransiiska ee ka horreeyey, oo ay Paris wareejisay xilligii laga daad-gureynayay ciidamadeeda.
Gumeysigii Faransiiska ee Aljeeriya wuxuu socday intii u dhaxeysay 1830 iyo 1962, maadaama mas’uuliyiinta iyo taariikhyahannada Aljeeriya ay sheegeen in xilligan uu goobjoog u ahaa dil ku dhowaad 5 milyan oo qof, iyo sidoo kale ololeyaal barakac iyo hanti la dhacay.
Sida laga soo xigtay hay’adda ay maamusho Sheikhi “waxay noqotay aasaaska haysashada xafiisyada kuwaas oo aan loo aqoonsanayn aqoonyahanada dhabta ah ee taariikhda.” “Waxaan cambaareyneynaa xaalada meelwalba, halkaas oo qof uu dalbado inuu helo kaydinta Algeria,” ayuu yiri Muhannad Amer.
Taariikhyahan Sophie wuxuu leeyahay xirida marinka keydka arrimahan looma jeedin “in la qariyo xaqiiqooyin aan la sheegi karin, laakiin waa in la qariyo karti darada madaxdii kaydka Algeeriya.”
Intii lagu guda jiray wareysiga bogga Faransiiska ee “Le Monde Africa” ​​bishii Nofeembar 2020, Sheekhi wuxuu isku dayay inuu caddeeyo mowqifkiisa isagoo wajahaya dhaleeceyn uu horayba u qabay, isagoo ku boorriyey saameynta “bulshada” asaga oo furay kaydad xasaasi ah.
Wuxuu odhan jiray mararka qaarkood “agaasimaha kaydka waxaa waajib ku ah inuu ixtiraamo kalsoonida bulshada kana hortago (shaacinta faylasha) ee u horseedaya saamayn xun shaqada bulshada.” Wuu is difaacay isagoo leh, “Saamayn kuma yeelan doono cilmi baarista, laakiin wali waxaa jira dad u yimaada (keydka) khilaafkan dartiis.”
Marka ay timaado, tusaale ahaan, arrimaha ay yihiin dad gorgortan ku filan, ma sii deyn karo. Sheekheey ayaa intaas ku daray “Tani waa kiiska markii la i waydiiyo in aan xareeyo qof lagu soo eedeeyay in uu gacansaar la leeyahay Faransiiska,” kuma tuuri doono faylalkaas aargudashada caanka ah aniga oo qaybinaya.
Le Monde ayaa tiri, “Dhibaatada oo dhan waxay tahay in Shiikhaygu uu qaato xaq u leeyahay inuu xukumo waxa bulshada u wanaagsan ama xun, iyadoon loo eegin qodobbada sharciga Al-Jeeriya ee la xiriira kaydadka taariikhdu markay ahayd 1988.”
Wargeyska Faransiiska ee Le Monde wuxuu leeyahay kacaanku wuxuu ka dhex bilaabmayaa taariikhyahanada reer Algeria. Hindisaha ayaa muujinaya jahwareerka sii kordhaya ee cilmi-baarayaasha ee la xiriira maamulka (Al-jeeriya), oo loo arko mid aan muuqan oo aan caqli-gal ahayn, oo ku saabsan maareynta kaydka qaranka, ayay tiri.
Markii hore, labada madaxweyne waxay ku heshiiyeen in la magacaabo laba taariikhyahan (midba midka kale) si looga wada hadlo faylalka xusuusta, maadaama Stora loo magacaabay dhinaca Faransiiska, iyo dhinaca Aljeeriya, Cabdi Majiid sheeqeey.
Si kastaba ha noqotee, marka loo eego Stora, Sheekheey kama uusan qeyb galin shaqooyin la mid ah taasoo ku saabsan kaydinta iyo talooyinka ku saabsan arrinta xusuusta, sida ay qortay Le Monde.
Ammar Muhannad wuxuu weydiinayaa, “Aaway warbixintii Aljeeriya? Dhinac kale, waxaa jira warbixinta (Stora) oo kicisa khilaaf ka dib markii la daabacay, dhinaca kalena waxaa jirta warbixin (laga filayo Shiikhayga) oo kicisa khilaafka iyadoo maqnaansho uu ku jiro. ”
Sheekheey, dhiniciisa, wuxuu qiil uga dhigayaa aamusnaantiisa xaqiiqda ah in warbixinta Stora aan si rasmi ah loogu gudbin masuuliyiinta Al-Jeeriya.
“Tani waa warbixin Faransiis ah oo aan si rasmi ah naloogu soo dirin si ay waajib ugu noqoto, ugu yaraan anshax ahaan, inaan ka jawaabno waxyaabaha ay ka kooban tahay,” ayuu u sheegay Qatari Al-Jazeera channel 22-kii Maarso, isagoo ka hadlaya Stora.
Jahwareerka ku hareeraysan doorka Sheekheey ee wadahadalkan ku saabsan ayaa kallifay taariikhyahanno inay hadlaan, halka uusan ku qanacsaneyn agaasimaha keydka muddo dheer.
Sannadkii 2016, taariikhyahan Fu’aad Soofi, oo ah agaasime ku-xigeen hore oo ay weheliyaan Sheekheey, ayaa mar horeba caasiyey isaga oo daabacay maqaal maalinle ah oo la magac baxay “Al-Wataan” oo uu ku cambaareynayo “xannuunka” Kaydka Qaranka iyo “dhimashadiisa gaabiska ah”.
Shan sano kadib, kacdoonku wuxuu qaatay weji wada jir ah isagoo wata warqad furan oo ku socota Tebboune, Le Monde ayaa sidaas leh.
Xaqiiqdii, cilmi baarayaal badan oo reer Al-Jeeriya ah ayaa lagu qasbay – had iyo jeer xaalado qalafsan iyo xaalado sharciyeed – inay tixraacaan haynta keydka keydka dibedda ee Qaranka, ama kuwa ku jira Arjiyada Adeegyada Difaaca ee Vincennes, halkaa soo loogu yeero ardiyada “madaxbannaanida” gumeysiga faransiiska ee Al-Jeeriya.
Kiiskan aan la sheegi karin wuxuu kicinayaa arinta sii xoojinta wadaagga dhijitaalka ah ee kaydka u dhexeeya Faransiiska iyo Algeria, illaa iyo inta asalka ah “dib loo celinayo”, sida laga soo xigtay gobolka Maghreb. Waxay sidoo kale muujineysaa sii xumeynta “caqabadaha xafiisyada” ee reer Al-Jeeriya oo ay cambaareeyeen intooda badan saxiixayaasha.
Waa tuma Nawal El Saadawi-dii Masar?
Waxaan u naseexeynayaa gabdho Soomaali ah oo sabankaan danbe u dagaalama waxbaa naga maqan, iyagoo ku hadlaaya kalmada kooxaha “Feminismka” inay ilaahay uga baqaan warkooda ayna fasahaadinin hablaha kale kana joogsadaan afkaaraha la soo min guuriyay ee dadkeena Soomaaliyeed aysan dhaqan u laheen diina aysan noo ahayn.
Warsame Maxamed Nuur Garaad Noor
Nawaal Alsacdaawi waa haweeney u dhalatay dalka Masar waxay dhalatay 27 Oktoobar 1931, Waxayna geeriyootay bisha 21 maarso 2021. Ree galbeedka waxay ugu yeereen “the Simone de Beauvoir of the Arab World”, ee ka soo baxday dalka carabta waxay kaloo ugu yeeri jireen ‘Haweeneyda ugu mayalka adag dalka Masar. Waxayna ku dhimatay isbitaal ku yaal Qaahira ka dib xanuun in mudo ah haayey.
Nawaal El Saadawi waxay ahayd muwaadin reer Masar ah oo cilmaaniya, haween, samafal, qoraa, dhaqdhaqaaqe, dhakhtar, iyo dhakhtarka maskaxda. Waxay qortay buugaag badan oo ku saabsan xoreynta haweenka, iyadoo si gaar ah waliba fiiro gaar ah u siisay ku dhaqanka gudniinka dumarka gaar ahaan gudniinka fircooniga. Waxay ka soo horjeedday diimaha aasaasiga ah. Waxaa lagu sifeeyay inay tahay “Simone de Beauvoir of the Arab World”, iyo inay tahay “haweeneyda ugu xagjirsan xagga diinta Islaamka cilmaaniyadda ee Masar”.
Waxaa guursaday nawaal ninka la yiraahdo Axmed Helmi way kala tageen waxaa guursaday, kadibna Rashad Bey ​wuuna furay), kadib waxaa guursaday Sherif Hatata waxay kala tageen sanadkii 2010, laba caruur ah ayay u dhashay. Waxay aasaastay ururka Midowga Haweenka Carabta, iyo ururka Xuquuqda Aadanaha ee Carabta.
Waxay ku guuleysatay abaal marino sida Abaalmarinta Waqooyi iyo koonfur sanadkii 2004. Waxaana siiya Golaha Yurub. Sanadkii 2005 waxay heshay billad ay Belgium-ka bixiyaan oo la yiraahdo INANA.
Waa haweeneyda qortay in kabadan 55 buugaag ayaa markii ugu horeysay ku iftiimiyay arinta gudniinka fircooniga ah (FGM). Haweenaydaan ayaa sidoo kale u ololeeyay haweenka kahadlaya xijaabka, guurka badan iyo sinaan la’aanta xuquuqda dhaxalka islaamka ee udhaxeysa rag iyo dumar.
Sanadihii hore Haweeneydan la yiraahro Nawaal al sacadawi waxay ka shaqeysay xarun haweenka lagaga umiliyo waxay halkaa ka aragtay dhibaatada dumarka ee uurka foosha iyo xanuunada la xiriira iyo gudniinka furcooniga ah. Waxay kaloo dhibsatay caddaalad darada lagula kaco dumarka, kadib waxay ka shaqo gashay wasaarada caafimaadka oo waxay noqotay Agaasimaha Wasaarada Caafimaadka.
1972, Nawaal waxay daabacday buuggeeda la yiraahdo: Woman and Sex (المرأة والجنس), ‘Haweenka iyo jinsiga.’ Buuggaan ayaa xambaarsan afkaaraha dhediga ”feminism”.
Markii ay dowlada Masar aragtay buuggan shaqadii waa laga eryay,
waxaa kaloo laga eryay madaxa tafatirenimo ee joornaalka caafimaadka. Sanado kadib waxay soo saartay joornaal ay u bixisay iska hor imaad. Kadin madaxweyne Anwar Saadaad wuu xiray haweeneydaan
Kadib waxay aliftay buug ay ugu bixisay xusuusihii xabsiga dumarka kadibna haweenka jooga harka eberka.
Intaas kadib waxaa u hanjabay kooxo muslimiin ah oo ku yiri ”naga jooji oo nagala dhex bax gaalnimada aad wadankeena ku wado haddii kale waanu iska kaa qaban.”
Kadib waxay u qaxday dalka Mareykanka, jaamacado kale ayay kasii waxbaratay macalinna ka ahayd. 2005 ayay dalkeed ku laabatay, 2010 ayaa lagu arkay Taxriir iyadoo dhex taagan oo nidaamka hala beddelo leh oo mudaharadeysa.
Sanadkii 2014 wareysi lala yeeshay Nawaal ayay ku af lagaadeysay diinta islaamka waana halka ay kaga luntay dariiqa saxda ah ee islaamnimada. 2015 ayay caysay cibaadada XAJKA ee xajarul aswadka iyo cibaadadka xajka. Waxay inkirtay asturka iyo xijaabka ay huwadaan dumarka islaamka una geftay kuna sheegtay in dumarka lagu caddaadiyo qaladna yahay. – Subxaanallaah.
Waxay tiri sida reer galbeedka ayaan rabaa.
– Waxay inkirtay xaqqa dhaxalka dumarka.
-Waxay inkirtay islaamnimadeeda.
-Waxay inkirtay janno iyo naar inay jiraan.
Akhriste guntii iyo gabagabadii waxaan soo guurineynaa waxa sababay in Nawaal xera weydaarato.
1. Arimaha qoyska: guurka badan iyo Furriinka. Guurka iyo furriinkana waa laba arrin sharci ah oo jira qofka wa inuusan u caroon raadadka ka imaanaya guurka ama furriinka waana wax jira jiri doona inta dunida jirto.
2. Inay aqoonteeda maadiga ah tala saaratay ilowdayna in shareecada islaamka barato.
3. Inay isku dayday si ay u alifato jid u gooni ah haba kaga dayatee dumar reer galbeed ah oo lahaa afkaaraha dumar u dirirka.
4. Durida iyo wax ka sheegida diinta islaamka waa tan ku hogaamissay baadi cad oo Alle ka fogaasho ah kadib markii ay la caadifootay lana xanaaqday dumar difaaca iyo u dagaal gelida wax ka baxsan dumarnimo.
Nawaal al sacdaawi waxay geeriyootay 21 bisha maarso 2021 iyadoo 90 jir ah. Haddii ay towbada haleeshan oo illaahay uga laabatay gefefkii waa kheyr haddii kale waa ku dhacday khaatumo xumo. – Ilaahay hanaga illaaliyo khaatumo xumo.
In kasta oo Islaamka iyo dhedignimada aysan gabi ahaanba lahayn meel ay iska galaan ama meelo ay isku mid ka yihiin, hadana labaduba waxay canbaareeyaan dulmiga dumarka. Labaduba waxay ku adkeysanayaan in haweenku ay yeelan karaan hantidooda ayna u tuuraan sida ay doonaan. Haweenku waxay noqon karaan ganacsato, sida Khadiija oo ahayd afadii ugu horreysay ee Muxammad (scw) oo ahayd tii ugu horreysay ee soo muslimta.
Taariikh nololeedka madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Cali Mahdi Maxamed oo kooban
Cali Mahdi Maxamed waxa uu xilli lagu qiyaasay 1938-kii ilaa 1939-kii ku dhashay deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ee Soomaaliya. Waxbarashadiisii aasaasiga ahayd wuxuu ku qaatay magaalada Muqdisho, isagoo markii dambena waxbarasho dheeraad ah u tagay dalka Masar.
Intii ay jirtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya waxa uu xubin ka soo noqday Aqalka Baarlamaanka. Markii ay burburtay dowladdii dhexe sanadkii 1991-kii ayuu noqday madaxweynaha Soomaaliya. Xilkaas waxa uu hayay intii u dhaxeysay 26-kii bishii January, 1991-kii ilaa 3-dii January, 1997-kii. Mar kale ayaa heshiis ka dhacay magaalada Qaahira loogu cusbooneysiiyay xilka waxaana sanadkii 2000 baddalay Cabdiqaasim Salaad Xasan.
Sharif Sheekh Axmed iyo Cali Mahdi Maxamed sanadka1994 gudaha dalka Libya
Cali Mahdi waxa uu xukunka qabsaday kaddib markii isbahaysi mucaarad ah oo hubeysan, oo uu ku jiray xisbigiisii USC ay xilka ka tuureen madaxweynihii muddada dheer ka talinayay Soomaaliya, Maxamed Siyaad Barre.
Hase yeeshee Cali Mahdi uma aysan suuragalin in uu nidaamkiisa wada gaarsiiyo dalka oo dhan, xilli ay Soomaaliya lugaha la gashay dagaallo sokeeye oo baahsan.
Intii uu madaxweynaha ahaa waxaa jiray dagaal loo yaqaanno “afar biloodle” oo dhex maray ciidamadiisa iyo xoogag daacad u ahaa Maxamed Faarax Caydiid.
Shir ay dalal ka mid ah beesha caalamka ka qeyb galeen oo sanadkii 1991-kii lagu qabtay dalka Jabuuti ayaa lagu damacsanaa in la isugu geeyo hoggaamiyeyaasha isku hayay talada Soomaaliya, hase yeeshee waxaa ku gacan seyray Caydiid oo aan ka qeyb galin shirkaas.
Beesha Caalamka ayaa Cali Mahdi markaas u aqoonsatay in uu yahay madaxweynaha Soomaaliya, inkastoo go’aankaas aysiyaasiyiinta qaar kasoo hor jeedeen.
Dalalkii maamulkiisa aqoonsaday waxaa ka mid ahaa Jabuuti, Masar, Sacuudiga iyo Talyaaniga.
Sanadkii 2000 waxa uu Cali mahdi mar kale ka qeyb galay shirkii magaalada Carta ee dalka Jabuuti. Hase ahaatee waxaa doorashada xilka madaxweynaha uga guuleystay Cabdiqaasim salaad Xasan oo horay wasiirka Arrimaha Gudaha uga soo noqday dowladdii Siyaad Barre.
Bilihii lasoo dhaafay ayuu mar qabsaday hadal-heynta shacabka kaddib markii uu hirgeliyay dhisme lagu tilmaamay kan ugu dheer magaalada Muqdisho. Mar wax laga weydiiyay sheegay in dhaqaalaha lagu dhisay gurigaas uu ka yimid maalgashiyo uu sameeyay.
Bishii November ee sanadkii 2020-kii ayuu mar si adag uga hadlay xaaladda Soomaaliya, wuxuuna sheegay in xilligan aan loo baahneyn “in dagaal dib loogu laabto”.
Siduu Cali Mahdi ku noqday Madaxweynihii Soomaaliya?
Sanadkii 1991-kii ayuu Cali Mahdi Maxamed noqday Madaxweynihii Soomaaliya kaddib markii ay xilka laga tuuray Maxamed Siyaad Barre oo 21 so xukumayay dalka. Cali Mahdi – oo Alle ha u naxariistee Arbacadii ku geeriyooday magaalada Niarobi ayaa xilka ugu sarreeya waddanka Soomaaliya qabtay xilli uu socday dagaal sokeeye oo xooggan.
Wuxuu noqday madaxweynihii afaraad ee soo mara dalka Soomaaliya.
Dabayaaqadii bishii January ee sanadkii 1991, Cali Mahdi waxaa madaxweyne ku meel gaar ah u doortay dad u badan xubnaha Jabhaddii United Somali Congress (USC) oo ka mid ahayd xoogaggii xukunka ka tuuray Jen. Maxamed Siyaad Bare.
Arintaas ayaa khilaaf ka dhex dhalisay jabhadda gudaheeda, oo waxaa madaxtinnimada Cali Mahdi diiday Jen. Maxamed Faarax Caydiid oo isu arkayay hogaamiyaha garabka milateri ee USC. Cilmi Faarax Webi waxa uu kamid ahaa xukuumaddii uu xilligaa dhisay Cali Mahdi, waxaana uu BBC-da uga warramay waxyaabihii dhaliyay khilaafkii Cali iyo Ceydiid.
“Dabkan khilaafka waxa keenay waa in Jeneraal Caydiid uusan ku qanacsaneyn qaabka wax loo dhigay, raggii kale ee siyaasiyiinta ahaana waxay u arkeen dalku inuusan gali karin xilli uusan xil Madaxweyne jirin oo ay khasab tahay in la sameeyo nin madax ah kaddibna wadahadal dib loo galo. Arrintaas waa la isku fahmi wayaay, Caydiidna ma uusan aqoonsanin dowladda waxaana billaabatay in Ciidamo la aruursado oo la kala shakiyo,” ayuu yidhi.
Caydiid waxa uu u arkayay in uu xaq u leeyahay hoggaanka maadaama uu ahaa nin askari ah oo soo dagaallamay, sida uu sheegay Webi. Dagaal xooggan oo bilooyin socday ayaa ciidamo kala taabacsan Cali Mahdi iyo Ceydiid ku dhexmaray magaalada Muqdisho, waxaana ka dhashay khasaaro ballaaran, iyo burbur baaxad leh.
Bartamihii 1991, waxaa shir caalami ah oo looga hadlayo xaaladda Soomaaliya martigeliyay madaxweynihii Jabuuti ee xilligaas, Xasan Guuleed Abtidoon. Shirka waxaa ka qeybgalay inta badan hogaamiyayaashii jabhadihii hubaysnaa, waxaana Cali Mahdi loo ansixiyay inuu yahay madaxweynaha Soomaaliya, inkastoo aanu shirkaas ka qeybgalin Jen. Ceydiid.
Dalal ay kamid yihiin Jabuuti, Masar, Sacuudi Carabiya iyo Talyaaniga ayaa durbadiiba aqoonsaday madaxtinimada Cali Mahdi, taasoo ka dhigtay madaxweynaha uu caalamka aqoonsan yahay ee Soomaaliya. Hase ahaatee xukuumaddii uu madaxweynaha ka ahaa Cali Mahdi ayaa fursad u heli weysay in ay xukunkeeda dhaafiso magaalada Muqdisho, sida uu sharraxayo Cilmi Faarax Webi.
Cilmi Faarax Webi ayaa qaba in Cali Mahdi aanu eed ku lahayn in xukuumaddiisa ay dalka intiisa kale gaari weyday. “Xilligii Cali Mahdi la doortay wuxuu ahaa xilligii ugu xumaa ee Soomaaliya ay dagaallada ku jirtay. Waad la socotaa , madaxweynihii Maxamed Siyaad Barre wuxuu joogay Gedo, dadku qax ayeyba ku jireen xilli dowlad la fidiyo ama fursad lagu ballaariyo Cali Mahdi xukuumaddiisii maba aysan helin.”
“Cali mahdi Ma uusan helin taageero dhaqaale iyo mid milateri oo uu xukunkiisa ku gaarsiin karay meel ka baxsan Xamar,” ayuu yiri Webi.
11-kii bishii December ee sanadkii 1992-kii ayey labada hoggaamiye kala saxiixdeen heshiis nabadeed oo dhigayay in ciidamada iska soo horjeeday 48 saacadood looga bixiyo magaalada.
Cali Mahdi xilka madaxweynaha waxa uu hayay intii u dhaxeysay 26-kii bishii January, 1991-kii ilaa 3-dii January, 1997-kii. Mar kale ayaa heshiis ka dhacay magaalada Qaahira loogu cusbooneysiiyay xilka. Sanadkii 2000 waxa uu Cali mahdi mar kale ka qeyb galay shirkii magaalada Carta ee dalka Jabuuti. Hase ahaatee waxaa doorashada xilka madaxweynaha uga guuleystay Cabdiqaasim salaad Xasan oo horay wasiirka Arrimaha Gudaha uga soo noqday dowladdii Siyaad Barre.
Bariga dhexe14 hours ago